Northern Cape, South Africa: Diamonds Mining Operation: ... Will consider sale, farm in, company acquisition or some combination of above ... For Sale Mining Operation: Matabeleland South Province, Zimbabwe Precious Metals: Gold (Au) Project centred in well recognised greenstone belt in Gwanda. 22 Claims cover 500 acres.
South Africa mining assets up for sale should go to local ...
Anglo American (AAL.L) and other companies looking to sell some of their mining assets in South Africa should sell to national champions, or companies owned by local communities and by their ...
Mines For Sale In South Africa . 2019-4-15Mines for sale in South Africa . When looking for mines for sale in South Africa, global investors and more than 170 companies are turning to Africa Mining IQ for its up-to-date mining intelligence, insight into Africas mining projects and key contact details..
「mining for sale south africa」 - Shrawley
Gold Mining Equipment In South Africa Crusher For Sale. Small Gold Mining Equipment For Sale In South Africa. Mining Equipment for Sale in South Africa Construction Oct 19 2017 183 More About Kanu Equipment One of the reasons why we are considered market leaders in the industry is our long history and solid reputation We work hard to support our clients and take care of their needs whether ...